Cosmic Sin (2021) | MM Movie Store
ကြှနျတျောတို့ နထေိုငျကွတဲ့ စကွဝဠာကွီးမှာ ကမ်ဘာဂွိုဟျက သတ်တဝါတှအေပွငျ တခွား မြိုးစိတျတှေ ရှိနဦေးမယျလို့ထငျပါသလား ….ရှိနရေငျရော ဘယျလိုပုံစံတှေ ဖွဈမယျလို့ထငျလဲ၊ သူတို့ကရော ကမ်ဘာဂွိုဟျကလူတှလေို အသိဉာဏျရှိကွလား၊ဒါမှမဟုတျ နိမျ့ကမြလား သာလှနျနမေလား၊ ဒါတှဟော စဉျးစားကွညျ့မယျဆို စိတျဝငျစားစရာပဲ . . .
ပိုပွီး စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးတာက ဒီလိုမြိုးစိတျတှသော တကယျရှိပွီး လူတှထေကျ အသိဉာဏျနဲ့ ဖနျတီးနိုငျမှု စှမျးအားကလညျး ပိုမွငျ့နမေယျ၊ သူတို့က လူတှကေို အန်တရာယျပေးလာမယျဆိုရငျ လူသားတှအေနနေဲ့ ဘယျလိုရငျဆိုငျကွမလဲဆိုတာပါပဲ။
ဒါဆိုရငျ လူသားတှအေနနေဲ့ ဒီ ကွမ်မာဆိုးကွီးကို ကြျောဖွတျနိုငျပါ့မလား လူသားတှသေကျတမျးဟာ အဓှနျ့ရှညျပါ့မလား ……ဆိုတာဟာ စဥျးစားစရာပါပဲ။ဒီဇာတျကားမှာ မငျးသားကွီး Bruce Willis က ဂြိမျးဈ ဖို့ဒျအမညျရှိ အာကာသဆိုငျရာ မဟာမိတျကောငျစီရဲ့ ဗိုလျခြုပျဟောငျးကွီးအဖွဈ ပါဝငျထားပွီး Frank Grillo က ဗိုလျမှူး ရိုငျအဖွဈပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။ Action, Adventure , sci-fiခဈြသူတှအေတှကျ အကွိုကျတှစေ့မေယျ့ ဇာတျလမျးတဈပုဒျပဲဖွဈပါတယျ။
ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်ကြတဲ့ စကြဝဠာကြီးမှာ ကမ္ဘာဂြိုဟ်က သတ္တဝါတွေအပြင် တခြား မျိုးစိတ်တွေ ရှိနေဦးမယ်လို့ထင်ပါသလား ….ရှိနေရင်ရော ဘယ်လိုပုံစံတွေ ဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ၊ သူတို့ကရော ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကလူတွေလို အသိဉာဏ်ရှိကြလား၊ဒါမှမဟုတ် နိမ့်ကျမလား သာလွန်နေမလား၊ ဒါတွေဟာ စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆို စိတ်ဝင်စားစရာပဲ . . .
ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာက ဒီလိုမျိုးစိတ်တွေသာ တကယ်ရှိပြီး လူတွေထက် အသိဉာဏ်နဲ့ ဖန်တီးနိုင်မှု စွမ်းအားကလည်း ပိုမြင့်နေမယ်၊ သူတို့က လူတွေကို အန္တရာယ်ပေးလာမယ်ဆိုရင် လူသားတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။
ဒါဆိုရင် လူသားတွေအနေနဲ့ ဒီ ကြမ္မာဆိုးကြီးကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါ့မလား လူသားတွေသက်တမ်းဟာ အဓွန့်ရှည်ပါ့မလား ……ဆိုတာဟာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ဒီဇာတ်ကားမှာ မင်းသားကြီး Bruce Willis က ဂျိမ်းစ် ဖို့ဒ်အမည်ရှိ အာကာသဆိုင်ရာ မဟာမိတ်ကောင်စီရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းကြီးအဖြစ် ပါဝင်ထားပြီး Frank Grillo က ဗိုလ်မှူး ရိုင်အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Action, Adventure , sci-fiချစ်သူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။